#IBC2018 Agbagharala Ngosipụta ahụ! - NAB Gosi News site na Mgbasa Mgbasaozi. Onye mgbasa ozi mgbasa ozi nke NAB Show, Onye NAB gosiri LIVE
Home » Apụta » #IBC2018 Agbagharala Ngosipụta ahụ!
The IBC Gosi 2018 ejuputara na ihe ngosi di iche iche na nzuko ogbako nke ga - enye ndi mmadu nile aka. A na-eme kwa afọ na September na RAI Amsterdam, n'afọ ndị a #IBC2018 ga-enwe usoro ogbako amalite na September 13th-17th na ihe ngosi na-amalite September 14th-18th. Uzo netwọk ga-abụ ihe dị egwu n'ofe ụlọ ma ị nọ na mgbakọ mgbakọ ma ọ bụ gaa na nke ọ bụla n'ime nzukọ.
E nwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche ịdebanye aha maka ogbako site na Attendee Registration, Alumni Registration (ebe ị gara IBC n'ime afọ ise gara aga dị ka onye nnọchiteanya ogbako ma ọ bụ onye nlere ngosi), ma ọ bụ Ndebanye aha (ebe ịchọrọ itinye akwụkwọ maka nzere ntozu) na N'ezie, Ndebanye aha ngosi (IBC2018 Exhibitors) ruru eru maka 30% ego na ogbako niile. Biko kpọtụrụ Onye Nchịkọta Nhazi gị nke ga-enwe ike ịhazi njem gị site na Mpaghara E-mpaghara Ọ bụrụ na ị maghị onye onye nhazi gị bụ maọbụ ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla biko kpọtụrụ registration@ibc.org). E nyere ya bụ hyperlink maka nhọrọ gị: ibc.itnint.com/IBC18/Online/CreateAccount.aspx?wf=attendee&stream=attendee&sourceCode=IBC061&cart=
Maka ihe niile njem dị mkpa (na gburugburu) obodo mara mma nke Amsterdam, IBC enyela njikọ dị egwu ka i wee nwee ike ịhazi njem gị. Maka ndị niile na-aga chọta ụzọ kachasị mfe na nke kachasị ụgwọ iji nweta #IBC2018 jiri ego ole na ole site na ndị ọrụ ụgbọelu na-ahụ maka IBC ma mụta ụzọ kacha mma ị ga-esi aga ebe ị nọ ebe a: show.ibc.org/visit/travel
Maka ihe niile mkpa ulo IBC na - arụ ọrụ na RAI Hotel Services iji nye ọnụego ego ma hụ na ị nwere ike ide akwụkwọ obibi maka IBC2018 iji kwado ego na mkpa gị. gaa ebe a: show.ibc.org/visit/accommodation
n'ihi na Ozi RAI ozi mgbakwunye otu n'ime ihe ngosi ụwa na nzuko omeiwu na Europe nke dị n'ebe ndịda nke Amsterdam gara ebe a: show.ibc.org/visit/venue
Banyere obodo mara mma nke Amsterdam ụlọ Europe na-atụ egwu na-enweghị akụkọ ihe mere eme, omenala na ihe omume. Site na ikpo ume iku ume ma na-adọrọ mmasị nke ọma, obodo a akwụsịghị iju. Maka ozi ndị ọzọ, biko gaa na Iamsterdam website.
Jide n'aka na ị debanye aha maka mgbakọ a dị egwu na ogbako. Ọ bụghị akaha! Magazin mgbasa ozi Broadcast ga-enyekwu nkọwa zuru ezu nke njirimara na ihe omume, yana yana ihe ọkụkụ ngwaahịa!
Kemgbe 1967, IBC emeela ka ọ bụrụ ihe omume kachasị emetụ n'ahụ ndị ọkachamara na-arụ ọrụ, njikwa na ịnyefe mgbasa ozi kọmputa, n'ụwa nile. N'akwụkwọ bụ International Broadcasting Convention, IBC esiwo na mgbasa ozi mgbasaozi ya taa, ọ na-agụnye usoro mgbasa ozi na nnyefe nke mgbasa ozi, site na ntanetị gaa na vinema dijitalụ, site na arụmọrụ na-arụ ọrụ na njedebe dị elu.
IBC na-anọgide bụrụ ihe omume kachasị mkpa maka ụlọ ọrụ ahụ, ọ na-aga n'ihu site n'ike ruo ike. Ugbu a, ọ na-adọta mmasị karịa ndị bịara 55,000, bụ ndị sitere na mba 170, na Septemba ọ bụla na Amsterdam. Mkparịta ụka nkà na ụzụ nke ndị ọgbọ na-enyocha bụ ebe ọ ga-esi malite echiche ọhụrụ kachasị mkpa. Akụkụ dị mkpa nke IBC Conference bụ akwụkwọ teknụzụ nke na-anọdụ n'akụkụ otu usoro ihe omume dị iche iche, mkparịta ụka na isi okwu, bụ nke dọtara mmasị ọ bụghị nanị ndị na-agbasa ozi ọma mana ndị dịka Prọfesọ Brian Cox na will.i.am.
Nzukọ a kwekọrọ na ihe ngosi zuru ezu nke na-eme ka ndị na-egosi 1,600 gosipụtara, nke ọ bụla na-egosi ọkwa nke nkà na ụzụ. IBC abụghị ebe a ga - ezute na ịkekọrịta ihe ọmụma, yana ohere ịntanetị na ihe atụ bara uru - site na nrite maka nchịkọta nkiri - na-enye aka n'eziokwu nke ịga. Iji mezuo ihe ndị a chọrọ ọhụrụ a ma gbasawanyewanye ahịa IBC na-aga n'ihu ịmepụta ụzọ dịgasị iche iche iji soro ndị na-ege ya ntị na-emekọ ihe, gụnyere mmeghe nke usoro Rising Stars nke na-enyere ndị ọgbọ ọhụrụ na ndị ọkachamara na nkà na ụzụ aka ịchọta ụkwụ ha na ụlọ ọrụ ahụ, na oku a na-akpọghị naanị-Nanị Nzukọ Ndị Isi, ihe omume maka ndị 150 nke ndị na-ahụ maka mgbasa ozi na ntụrụndụ na-emepụta atụmatụ n'ọdịnihu. IBC mekwara usoro ihe omume ọhụrụ - IBC Content Everywhere - nke na-ewere IBC kacha mma na ntụziaka ọhụrụ.
Ihe omuma na ihe omuma nke IBC, nke ndi ulo oru nke ulo oru ahu na-aru, na-aputa n'ime ihe ohuru uwa a, nke na-ele anya ya na ndi ozo. IBC Ọdịnaya N'akụkụ niile na-egosipụta ọdịdị dị iche iche nke ụwa nke mgbasa ozi eletrọniki ejikọrọ. Dị ka IBC ọ na-enye ohere maka arụmụka na nchọpụta nke azụmahịa, ọrụ nzụpụta na ịmepụta ihe, ma IBC Content Everywhere na-egosipụta ụdị dị iche iche nke mgbasa ozi na njikọta na ụwa IP nke na-enye ya anya na nlezianya anya ya.
Ihe kacha ọhụrụ site n'aka Bridgid Harchick (-ahụ ihe niile)
#NCHANYE: Broadfield na-akpọsa nkesa Distribution na RED Cinema - October 17, 2018
#AHỤGHỊ Ejulala ngosi nke ICG: Lee ka Television a na-edeghị aha na-emegharị Multi-Cam! - October 15, 2018
#IBC2018 Elegharala Ngosipụta! - August 28, 2018
Broadcast Naa Magazine Broadcast Engineer Broadcast Engineering Broadcasting Convention video Engineer	2018-08-28
Previous: Dejero Enhances Encoding and Network Blending Software na IBC2018
Osote: Studio Studio nke mbụ: Akwụkwọ nkà ihe ọmụma MEMS nke Infineon nyere Zylia ZM-1 microphone array
Archives Họrọ net November 2018 (219) October 2018 (496) September 2018 (495) August 2018 (398) July 2018 (876) June 2018 (869) Ka 2018 (871) April 2018 (831) March 2018 (780) February 2018 (685) January 2018 (605) December 2017 (396) November 2017 (712) October 2017 (835) September 2017 (608) August 2017 (583) July 2017 (710) June 2017 (543) Ka 2017 (621) April 2017 (695) March 2017 (704) February 2017 (340) January 2017 (364) December 2016 (608) November 2016 (344) October 2016 (556) September 2016 (622) August 2016 (1056) July 2016 (532) June 2016 (414) Ka 2016 (505) April 2016 (713) March 2016 (743) February 2016 (382) January 2016 (122) December 2015 (358) November 2015 (327) October 2015 (152) September 2015 (259) August 2015 (440) July 2015 (276) June 2015 (140) Ka 2015 (128) April 2015 (435) March 2015 (289) February 2015 (298) January 2015 (131) December 2014 (103) November 2014 (194) October 2014 (149) September 2014 (381) August 2014 (250) July 2014 (287) June 2014 (363) Ka 2014 (231) April 2014 (744) March 2014 (560) February 2014 (427) January 2014 (289) December 2013 (137) November 2013 (545) October 2013 (290) July 2013 (26) Ka 2013 (13) April 2013 (1) March 2013 (2) 0 (306)
Hey Buddy !, Achọtara m ozi a maka gị: "#IBC2018 Agbagharala Ngosipụta!". Nke a bụ njikọ weebụsaịtị: https://www.broadcastbeat.com/ibc2018-dont-miss-the-show/. Daalụ.